ဟာသပဒေသာ Archives •
ထီကိုကံစပ်ပြီးထိုးတာမျိူးတွေ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ်တွေ့မို့လို့ပြောပြတာပါ ….
ထီကိုကံစပ်ပြီးထိုးတာမျိူးတွေ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ ကိုယ်တွေ့မို့လို့ပြောပြတာပါ …. ထီကို ကံစပ်အောင် ဆိုပြီး မိတ်ဆွေနဲ့ သော်လည်းကောင်း ၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ သော်လည်းကောင်း ရှယ်ယာ လုပ်ပြီး ထိုးနေကြတဲ့ လူတွေကို သတိပေးချင် ပါတယ် … ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ထီကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ထိုးကြပါ ။ Continuous reading
အပျိုကြီးကုန်းရွာသား မောင်လေး တစ်ယောက်ကို သွားကြူမိလိုက်တဲ့ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်
26/09/2019 L H 0
အပျိုကြီးကုန်းရွာသား မောင်လေး တစ်ယောက်ကို သွားကြူမိလိုက်တဲ့ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် ဆိုးပါ့ကွယ်​..အပျိုကြီးဘဝ ( စလိုက်ဦးမည် ) အပျိုကြီး – “Hi ..​မောင်​​လေး” ​ကောင်​​လေး – “Hi Hi …မမ” အပျိုကြီး – “မောင်လေးက ဘယ်ကလဲဟင်။ ပလုံဖိုင်းပုံလေးက​တော့ အလွင့်​​​လေးနော့.. Continuous reading
ဝိတ်တာတွေအားလုံးရဲ့ ဘောင်းဘီဇစ်မှာ အဖြူရောင်ကြိုးလေးတွေ တွဲလောင်းလေးချထားရခြင်း အကြောင်းရင်း…
20/09/2019 L H 0
ဝိတ်တာတွေအားလုံးရဲ့ ဘောင်းဘီဇစ်မှာ အဖြူရောင်ကြိုးလေးတွေ တွဲလောင်းလေးချထားရခြင်း အကြောင်းရင်း… `ချလွမ်´ စားသောက်နေရင်း မတော်တဆ ဇွန်းပြုတ်ကျသွားတာ ချက်ချင်းပဲ အနားမှာ ရှိနေတဲ့ စားပွဲထိုးလေးက ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက ဇွန်းအသစ် တစ်ချောင်း ထုတ်ပေးလာတယ်။ ထူးဆန်းနေတော့ မေးမိတာပေါ့ ” မင့်ဘောင်းဘီထဲမှာ ဇွန်းက အမြဲရှိနေတာလား…..? ” ” Continuous reading
တကယ်တော့ ယောက်ကျားတွေ KTV၊ မာဆတ်သွားတယ်ဆိုတာ . . .
တကယ်တော့ ယောက်ကျားတွေ KTV၊ မာဆတ်သွားတယ်ဆိုတာ . . . အဲ့ဒီက ၀န်ထမ်းမလေးတွေဖြစ်တဲ့ သံစဉ်၊ မြတ်နိုး၊ ကြယ်စင်၊ ဂျုလိုင်၊ စနိုး၊ လေပြေ တို့ရဲ့ နောက်ကွယ်က သူတို့ကို မှီခိုနေကြတဲ့ လေဖြတ်လို့ ဆေးကုနေရတဲ့ အသက် ၆၀ ကျော် အဖေကြီး၊ Continuous reading
တော်တော်လည်တဲ့ လူကွာ ။ ။ ။ ။
28/08/2019 Yan Naing 0
တော်တော်လည်တဲ့ လူကွာ ။ ။ ။ ။ တရုတ်နိုင်ငံက ဆရာဝန် တစ်ယောက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်လာတယ်။ တစ်လကြာတဲ့အချိန်ထိ အလုပ်ရှာမရတာနဲ့ အခန်းငှားပြီး ဆေးခန်းတစ်ခု ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဆေးခန်းအပြင်မှာ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု ထောင်ထားလိုက်တယ်။ ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှာ ခုလို စာရေးထားတယ် ။ – “ဆေးတစ်ခါကု Continuous reading
အ လိုက် မ သိ တဲ့ ဂျ ပန် ။ ။ ။ ။
အ လိုက် မ သိ တဲ့ ဂျ ပန် ။ ။ ။ ။ . . . . . . . . . . . . . . Continuous reading
ကားစီးပြီး ခါးပတ်မပတ်မိတဲ့ ဆရာတော်ကို ဦးရဲကြီးက (၂၅၀၀၀) လှူလိုက်တဲ့ အလှူ
ကားစီးပြီး ခါးပတ်မပတ်မိတဲ့ ဆရာတော်ကို ဦးရဲကြီးက (၂၅၀၀၀) လှူလိုက်တဲ့ အလှူ ဦးရဲကြီးက ဆရာ တော်ကို လှူတာ လား ဆရာတော် က ဦးရဲကြီးကို လှူတာ လား ဖတ်သာ ကြည့်တော့ ဗျာ ဒီနေ့ ဆရာတော် က သူ့ကားမောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာ Continuous reading
26/07/2019 KPST 0
“သမီး ဘဝတော့ ပျက်ပါပြီ အမေရယ်” “ညည်းကို မေးနေတယ် ဘယ်သူနဲ့လဲလို့” “ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း” “ဒီမှာ မိအေး ညည်း ဒီလိုငိုနေလို့မပြီးဘူး.. ကာယကံရှင်က ဘာတဲ့လဲ ညည်းကို.. တာဝန်မယူနိုင်ဘူးတဲ့လား..” “ဟင့်အင်း အမေ.. သူ သိတောင် မသိသေးဘူး”“ဟင်..ဟုတ်လား ပြောပြောသမီး.. ဘယ်သူလဲ အမေ Continuous reading
24/07/2019 KPST 0
မိုးဖွဲညရဲ့ကြောက်စရာ…… အဖြစ်အပျက် မနေ့ ည က..သခင်မြ ပန်း ခြံ က နေ ဌာ န လမ်း ကို အောက် ကြည် မြင့် တိုင် လမ်း အ တိုင်း လမ်း လျှောက် ပြန် တယ်။ည ၁ Continuous reading
25/06/2019 Yan Naing 0
” တ ကိုယ်တော် ဝဲကျော် “( စာ က ရှည်ပေ မယ့် တ ကယ် ရီ ရ ပါ တယ် ဖက် ကြည့် ပါ ) မ သိ ရင် .. တ ရုတ် Continuous reading